CIQAAB: UEFA Oo Cristiano Ronaldo Ganaax Culus Ku Ridaysa Iyo Warbaahinta Oo Qiyaastay Inuu Seegi Karayo Kulamada Dambe Ee Champions League Iyo In Kale – Latest Sports News
Xiddiga kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay in xidhiidhka qaaradda Yurub ee UEFA ay ka fiirsanayso ganaax ay ku riddo kaddib markii uu Salaasadii sameeyey dabbaal-deg hore loogu ciqaabay Diego Simeone.
Ronaldo ayaa dhaliyey saddexley ciyaartii naadigiisu 3-0 kaga adkaaday Atletico Madrid oo lugtii hore ee wareegga 16-ka kaga soo adkaatay 2-0.
Simeone ayaa ciyaartii hore ee ay kooxdiisu ka adkaatay Juventus waxa uu sameeyey dabbaal-deg dhaqan xumo ah oo uu ku mutaystay ganaax lacageed oo UEFA uga dhigtay anshax marin, balse waxa isaguna sidii oo kale sameeyey Cristiano Ronaldo markii uu kasoo aarsaday ee uu kooxdiisa u diray wareegga siddeed-dhamaadka.
Muuqaallo daawasho ah ayaa isbarbar-dhig loogu sameeyey dabbaal-degga labada nin ee Ronaldo iyo Simeone, laakiin FIFA wali ma caddaynin inay Cristiano ku ciqaabi doonto hab-dhaqankaas sidii ay horeba ugu samaysay Simeone iyo in kale, hase yeeshee warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa gellinkii hore ee khamiista shaaciyey in miiska UEFA ay saaran tahay warqadda ganaaxa oo aanay weli bannaanka imanin, dhawaanna ay soo baxayso.
Wargeyska caanka ah ee Calciomercato ee kasoo baxa Talyaaniga ayaa shaaciyey in UEFA ay ganaaxayso Ronaldo, hase yeeshee muu caddaynin in ganaaxu noqon doono mid lacageed iyo in garoomada laga xayiri doono kulamada muhiimka ah ee Champions League ee soo socda.
BBC Sports ayaa iyaduna sheegtay in Ronaldo uu mari doono ganaax lacageed oo aan badnayn, maadaama Simeone oo ay isku mid ahaayeen lagu xukumay €20,000.
Isku-aadka Champions League oo la samaynayo Jimcaha maanta, Juventus waxay ka rajaynaysaa inay ku aaddo koox u jilicsan, balse nasiibkeeda ayay ka qaadi doontaa, halka ay dhinaca kalena isha ku haynayso go’aanka UEFA ka gaadhayso Ronaldo oo ay filanayso inuu ahaado mid aan garoomada ka joojinin.
Si kastaba ha ahaatee, UEFA ayaa laga filayaa inay war kasoo saarto dhacdadan, waxaana la eegi doonaa nooca ay noqoto ciqaabka uu maro Ronaldo.